एक बर्षको बच्चाले खेल्दाखेल्दै अचानक जिउँदो सर्प निलेपछि….हेर्नुहोस्..
September 12, 2020 21751
अहिलेको समयमा हरेक आमा’बाबुहरु आफ्ना सन्तानका लागि पर्याप्त समय दिदैनन् । आफ्नो काममा व्यस्त रहने आमा’बाबुले सन्तानलाई समय दिन सकिरहका हुँदैनन् ।
यो बीचमा भार’तको उत्तर प्रदेशको बरेली जिल्लामा एउटा अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ । भारतीय सञ्चा’रमाध्यमहरुका अनुसार एक बच्चाले खेल्दाखेल्दै जिउँदो सर्प निले’का छन् ।
भारतको चर्चित अखबार टाइम्स अफ इन्डियाको अनला’इन संस्कर’णमा आएको समाचार अनुसार बच्चाकी आमाले आफ्नो छोराको मुखभित्र केही वस्तु देखेपछि हतप’त हेरिन् । जब उनले त्यो वस्तुला:ई बाहिर निकालिन् तब उक्त वस्तु स’र्प बच्चा भएको थाहा पाइन् । उनले छोरालाई तत्का:ल अस्पताल पुर्याइन् ।
बच्चाका पिता धर्म’पाल एक किसान हुन् । उनी आफ्ना एक वर्षका छोरा देभेन्द्र र ६ इन्च लामो मरेको सर्पको बच्चा लिएर अस्प’ताल पुगे । धर्मपालले इमर्जेन्सी स्वास्थ्य अधि’कारी डा. हरिश चन्द्रलाई उनको छोराले सर्प निलेको जान’कारी लिँदै मरेको सर्पको बच्चा’लाई टेबलमा राखिदिए ।
डाक्ट’रले तत्काल यो सूचना फिजि’सियन डाक्टर एएम अग्र’वाललाई जानकारी दिए । त्यसपछि बाल’कलाई इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरियो । डाक्टरका अनुसार त्यो सानो सर्प करेत’को बच्चा हो, जुन असाध्यै विषालु हुन्छ । समयमै उप’चारका कारण बच्चा खतरा’मुक्त छन् ।
Prev४ हजारको निहुमा घर’बेटिले दाउरो प्र’हार गर्दै देखेका प्रत्यक्ष’दर्शी मिडियामा (भिडियो सहित)
Nextबढ्यो संक्रमितको संख्या, आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस्
सुनको मूल्य घट्यो, नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
टिभीमा लाईभ रिपोर्ट गरिरहेकी महिला रिपोर्टरको माईक कुकुरले खोसेर भागेको भिडियो भाइरल
आज मंसिर २४ गते बुधबारको राशिफल पढेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्…
२० वर्षसम्म हजुर-आमाको कवाडी भनेर बेवास्ता गरे,’एक दिन कपडा हटाएर हेर्दा…
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (81145)